“Mar walba waa midka ugu fiican” – Tababaraha xulka qaranka Argantina oo difacay Lionel Messi – Gool FM
(Argantina) 14 Feb 2020. Macalinka xulka qaranka Argantina ee Lionel Scaloni ayaa sheegay in Lionel Messi inuu had iyo jeer ku fiican yahay gudaha garoonka, xitaa haddii uusan goolal dhalin ama marka uusan kasoo muuqan garoonka.
Lionel Scaloni ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray mar uu la hadlayay warbaahinta:
“Ma arko Lionel Messi oo qaab ciyaareedkiisa liita meel kasta uu ku ciyaarayo, sababtoo ah mas’uuliyadiisu waa si isku mid ah Barcelona iyo xulka qaranka Argentina”.
“Xitaa marka uusan Lionel Messi goolal dhalinin, ama uusan si fiican u muuqanin, wuxuu noqonayaa kan ugu fiican garoonka”.
Intaas kaddib Macalinka xulka qaranka Argantina ee Lionel Scaloni ayaa wuxuu ka hadlay ka qeyb galkooda tartanka Copa America 2020 wuxuuna yiri:
“Xulkeena marwalba waa musharax, laakiin dadku waxay moodayaan in xulkeena uu ka mid yahay xulalka ugu fiican aduunka, balse aniga uma arko inaan sidaas nahay”.
“Laakiin waxaan u dagaalami karnaa wax walba, sababtoo ah waxaan heysanaa xul xoogan, waxaana ka mid nahay shanta xul qaran ee u sharaxan iney ku guuleystaan Copa America oo ay ka mid yihiin Brazil, Colombia, Chile iyo Uruguay”.